धर्म Archives - Suchana Daily
भगवान श्रीराम विष्णुको अवतार हुन्
हिन्दु धर्मालम्बीहरुको आस्थाको प्रतिक भगवान् रामको जन्म नेपालमा नै भएको भन्ने सरकारले दाबी गरेका बेला सरकारले प्रमाण् समेत जुटाउन लागिपरिरहेको छ । चितवनको माडी नगरपालिकाको ठोरीमा अयोध्या निर्माण गर्ने र रामको मन्दिर बनाउने प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसकेका छन् । भगवान विष्णुको अवतार भएका भनिएका.....
सोमबार धेरै नारीहरु व्रत बस्छन् । सोमबारको व्रत बस्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेव महादेवको पूजा गरिन्छ । अविवाहित नारीले सुयोग्य बर तथा विवाहिताले पतिको दीर्घायूको कामनासहित भगवान शिवको पूजा आरधना गरिन्छ । यो दिन सेतो रंगको कपडा लगाउने र सेतै रंगको.....
प्रेरक भन्नुको अर्थ के हो ? पक्कै पनि प्रेरक भन्नुको अर्थ यस्ता कुराहरु जसले हाम्रो भावना बुझेको प्रतित हुन्छ । यहाँ त्यस्तै १५ भनाइहरु राखिएको छ जसले हाम्रो भावना बुझ्छ । हाम्रो आदर्शका कुराहरु गर्छन् र हामीलाई केहि ज्ञान दिन्छन् । तपाईलाई यी १५ महान् भनाईहरु पढ्दा कस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्टमा भन्नुहोला.....
जेठ २६ गते साेमबार देखि शुक्रहग्र उदय हुँदै छ। १७ गते शनिबार पश्चिम दिशाबाट अस्त भएका शुक्रग्रह साेमबार विहान ९ बजेर २३ मिनेटमा पूर्व दिशाबाट उदय हुन लागेका हुन । शुक्रअस्तका क्रममा राेकिएका विभिन्न साइत तथा शुभ मुहुर्त हरुपनि साेमबार देखि पूर्ववत् रुपमा सुचारु हुनेछन् । धार्मिक हिसाबमा शुक्र तथा.....
घरभित्र पशुपतिका शिवलिंग
काठमाडौं । पशुपति मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट अन्नपूर्ण भण्डारतिर आउँदा बाटोमा एउटा घर छ। लामो कालखण्ड पार हुँदै जाँदा त्यही घरभित्र थुनिन पुगेको छ– पशुपति मन्दिरको ऐतिहासिक शिवलिंग। थुनिएको शिवलिंग यति महत्वशाली हो, जहाँ पशुपति मन्दिरका मूलभट्टले गर्भगृहमा प्रवेश गर्नुअघि शपथ लिनुपर्छ। पशुपति क्षेत्रमा.....
काठमाडौं, १७ असार । आज हरिशयनी एकादशी अर्थात ठूली एकादशी । यस दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले औषधीय गुणयुक्त तुलसी रोपेर भगवान श्रीहरि अर्थात् विष्णुको पूजा-आराधना गर्ने गर्छन् । आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी भनिन्छ । यस दिन नेपाल र भारत लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा बसोवास गर्ने.....
वि.सं. २०७७ असार -१७,बुधवार,ई.सं.२०२० जुली – १, शक संवत्-१९४२,नेपाल संवत्-११४० दिल्लाथ्व,प्रमादी,उत्तरायण,ग्रीष्म,आषाढ शुक्लपक्ष तिथि-एकादशी , १६:५० बजे उप्रान्त द्वादशी,नक्षत्र-विशाखा , २६:३८ बजे उप्रान्त अनुराधा,योग-सिद्ध , ११:५६ बजे उप्रान्त साध्य,करण-वणिज ०५:५९ बजेदेखि भद्रा , १६:५० बजे उप्रान्त तैतिल,चन्द्रराशि-तुला,आनन्दादि.....
राजनीतिमा सफल हुनका लागि भाग्यकाे पनि साथ चाहिन्छ । देश काल र परिस्थिति अनुसा नै जन्मिन्छन जनप्रिय राजनीतिज्ञ राजनेता । हरेक मानिसले आफूले चाहेअनुसारकाे कामहरु गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता याेग हुने राजनेता विश्वमै बिरल्लै जन्मेका हुन्छन् । राजनेताहरुले जनताका प्रतिनिधित्व गर्दछन जुन जनभावना अनुसार.....
काठमाडौँ – प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घरघरमा तुलसीको बिरुवा सारी चार महीनासम्म गरिने विशेष पूजा शुरु गरिँदैछ । एक महीनाअघि जेष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घरघरको तुलसी मोठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मोठमा सारिन्छ । सनातन वैदिक परम्पराअनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ । आजदेखि कात्तिक.....
सर्लाहीको हरिपुरमा भे’टियो ऐ’ति’हा’सि’क पाँच फिट भन्दा लामो शि’व’लिं’ङ
बरहथवा,१५ असार । सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका वडा नं. १ को जंगलमा पाँच फिट भन्दा लामो शिवलिंङ फेला परेको छ। मुक्तेश्वर सामुदायिक वन भित्रको जंगलमा सोमबार बिहान शिवलिंङ भेटिएको समुहका सचिव निर्मला मैनालीले जानकारी दिए । समुदायिक वनले पोखरी निर्माण गर्न ईंटाको थुप्रो हटाउने क्रममा शिवलिंङ फेला परेको हो। सोमबार.....